Kubatsira Vanotambura Nevarombo: Chinoita Kuti Vamwe Vapemberere Krisimasi
“Munhu ane ziso rine mutsa achakomborerwa, nokuti anopa akaderera zvokudya zvake.”—ZVIREVO 22:9.
Vanenge vachida kutevedzera Jesu uyo aibatsira varombo, vanorwara uye vanotambura. Vanofunga kuti nguva yeKrisimasi ndiyo yakanaka kuita izvozvo nokuti ndiyowo nguva yokuti kazhinji masangano anobatsira vanotambura anoshanda nesimba achiunganidza zvipo.
Panguva dzemazororo, vakawanda vanenge vachimhanya-mhanya kutenga, kuita zvemafaro uye kushanyira hama neshamwari. Zvose izvi zvinoita kuti vasare vaine nguva shoma, simba, uye mari zvokuti vabatsire vanotambura, kunyange zvazvo vangapa mari kumasangano anobatsira vanotambura.
“Usarega kuitira zvakanaka vaya vanofanira kuitirwa zvakanaka, kana ruoko rwako ruine simba rokuzviita.” (Zvirevo 3:27) Varombo nevane nzara uye vaya vane mamwewo matambudziko, havangotamburi panguva yeKrisimasi chete. Kana ukaona mumwe munhu achida kubatsirwa uye “ruoko rwako ruine simba” rokumubatsira, ungamirira kuti zororo risvike here? Uchakomborerwa kana ukamunzwira tsitsi womuitira mutsa.
“Zuva rokutanga kwevhiki roga roga mumwe nomumwe wenyu ngaatsaure chimwe chinhu ari kumba kwake achichengete, maererano nokubudirira kwaangave achiita.” (1 VaKorinde 16:2) Muapostora Pauro akapa zano iroro kuvaKristu vepakutanga avo vaida kubatsira varombo. Ungakwanisa here ‘kutsaura’ kana kuchengeta mari yaunogona kugara uchipa vanotambura kana kuti rimwe sangano rinoshandisa mari nemazvo pakubatsira vanotambura? Ukadaro unenge uchiratidza kuti une hanya nevanotambura asiwo uchipa zvinoenderana nehomwe yako.
“Musakanganwa kuita zvakanaka nokugoverana zvinhu nevamwe, nokuti Mwari anofadzwa kwazvo nezvibayiro zvakadaro.” (VaHebheru 13:16) Ona kuti pane “kugoverana zvinhu nevamwe” chete, tinofanirawo kuyeuka “kuita zvakanaka,” kureva mabasa okubatsira vamwe. Somuenzaniso, vabereki vakangwara vanodzidzisa vana vavo kuti vabatsire vakwegura mabasa epamba. Vanovadzidzisawo kunyaradza vanorwara nokuvanyorera kadhi, kuvashanyira kana kuti kuvafonera, uye kuti vashamwaridzane nevamwe vana vanotambura kana kuti vakaremara. Izvozvo zvinoita kuti vana vadzidze kuva nemutsa uye rupo chero panguva ipi zvayo yegore.
Vabereki vakangwara vanodzidzisa vana vavo kuti vabatsire vakwegura, vanorwara, uye vamwe vana vanotambura kana kuti vakaremara. Izvozvo zvinoita kuti vana vadzidze kuva nemutsa uye rupo chero panguva ipi zvayo yegore
Rudo Nemufaro Panguva yeKrisimasi—Kubatsira Vanotambura